Guddoonka Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare oo ka qeyb galaya caleema saarka Lafta-gareen – Kalfadhi
Guddoonka Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare oo ka qeyb galaya caleema saarka Lafta-gareen
MUQDISHO, 16 JAN 2019 (KALFADHI)-Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay uga qeyb galaya Xafladda caleema saarka Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed.
Wafdigaan oo lagu casuumay Xafladda ayaa shalay iyo dorraad kala gaaray Baydhabo. Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo Wafdigiisa ayaa shalay galab ka baxay magaalada Muqdisho waxaana si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee Koonfur Galbeed.
Sidoo kale magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxaa gaaray wafdi ka socda Guddoonka Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya iyo Senatro ka tirsan Xildhibanada Aqalka Sare oo degaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed. Wafdiga ayaa waxaa hogaaminayay Guddoomiye ku xigeenka 2-aad ee Aqalka Sare Mowliid Xuseen Guhaad.
Masuuliyiin isugu jira Xildhibaano, Wasiiro iyo Saraakiil kale oo ka tirsan Koonfur Galbeed ayaa wafdigaan ku soo dhaweeyay Garooonka magaalada Baydhabo waxaana kadib loo galbiyay xarunta Madaxtooyada. Masuuliyiinta gaaray magaalada Baydhabo ayaa ilaa hadda la hadlin warbaahinta waxaana ujeedada socdaalkoodu uu yahay ka qeybgalka Xafladda caleema saarka Madaxweyne Lafta-gareen oo la doortay 19-kii bishii Diseembar ee sanadkii 2018.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa maalmo ka hor soo gaba-gabeeyay socdaal iyo kulamo wadatashi ah uu la qaadanayay odayaasha iyo waxgaradka gobolada Koonfur Galbeed, gaar ah magaalooyinka Xudur iyo Baraawe oo uu socdaal ku tagay. Sidoo kale odayaasha magaalada Baydhabo ayuu madaxweynaha kala hadlay xaaladda Koonfur Galbeed.